DEG-DEG: Isqarxin iyo weerar toos ah oo ka dhacay baarlamanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Muqdisho – Mareeg.com: Koox hubeysan oo loo badinayo iney ka tirsan yihiin Alshabaab, kuna labistay dharka ciidamada Soomaaliya ayaa weeraray xarrunta baarlamaanka Soomaaliya, waxaana la maqlay qarax weyn, xilli uu baarlamaanku shirk u jiray.
Sida ay sheegayaan wararka horudhaca ah, nin labisan dharka ciidamada uu isku dayey inuu orod ku galo gudaha baarlamaanka, waxaana celiyey qaar ka mid ah askartii ilaalinayey baarlamaanka, taasoo keentay inuu is qarxiyo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa koowaad ee la maqlay uu geystay gaari uu watay qof isi soo miidaamiyey. Waxaa markaas kadib la maqqlay 3 qarax oo kale.
Waxaa sidoo kale la sheegay in koox kale oo la socotay nin is qarxiyey, islamarkaana sitay hub iyo dharka ciidamada ay weerar toos ah ku qaadeen ilaalada baarlamaanka, halkaasna uu ka dhacay isk hor-imaad kooban.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa baahisay in raggii hubka sidatay ay toogteen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo saarnaa dusha sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Inkastoo warbaahinta dowladdu sheegtay in weerarka dhacay ahaa mid aad u kooban, haddana waxaa weli laga maqlayaa xarrunta golaha shacabka rasaas u muuqata mid la is dhaafsanayo.
Lama oga in kooxaha weeraray inay gudaha u galeen iyo in kale, hase ahaatee rasaas ayaa weli laga maqlayaa hareeraha baarlamaanka.
Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa daad gureynaya dhaawacyo isugu jira askar iyo dad shacab ah oo ka dhawaa agagaarka baarlamaanka.
Waxaa goobta gaaray ciidamada Afka duubta ee Gaashaan, waxeyna ku guda galeen howlgal ka dhanka ragga weerarka ku qaaday xarrunta baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Saciid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in firirka qaraxu gaaray dhismaha baarlamaanka, islamarkaana ay daateen muraayadaha ku xirnaa dhismaha xarrunta goblaha Shacabka.
Xilshibaan Saciid wuxuu tilmaamay iney jiri karto dhasaare dhimasho iyo dhaawac ah, hase ahaatee uusan arkin xildhibaan wax gaareen marka laga reebo dhaawacyo fudud oo xildhibaanda qaar gaarsiiyeen muraayadaha burburay.
Xildhibaanada loo saaray albaab xiga dhanka degmada Holwadaag iyo Villa Somalia, waxaana xaaladdu weli tahay mid cakiran. Ma jiro wax war rasmi ah oo weli kazoo baxay dowladda Soomaaliya, maadaama howlgalku weli socdo.
Wixii soo kordha kala soco Mareeg Media Inshaa Allah